For MIET post graduate students ...: အဆင့် (၆) Defense အပြီး ВАК သို့တင်ရန်စာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်ခြင်း
အဆင့် (၆) Defense အပြီး ВАК သို့တင်ရန်စာရွက်စာတမ်းများပြင်ဆင်ခြင်း
Defense အပြီး ВАК သို့တင်ရန် လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ Defense ပြီးပါက Нина Г.М. မှ တွေ့ရမည့်ရက်ကိုချိန်းပြီး ဆက်လုပ်ရမည့်စာရွက်စာတမ်းများအား တစ်ခုချင်းသေချာရှင်းပေးမှာပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ပို၍အမှားနည်းစေရန် အောက်ပါအတိုင်း အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
၁) Диссертация စာအုပ်ချုပ်ပြီးသား (၁ အုပ်)
၂) Диссертация စာအုပ်မချုပ်ရသေးသောအနေထား (၁ စုံ)
၃) Стенограмма (၂ စုံ)
၄) Справка (၃ စုံ)
၅) ФГУП «ВНТИЦ» သို့ပေးရန်အပေါ်စာ (၃ စုံ)
၆) Российская Государственная библиотека သို့ပေးရန်အပေါ်စာ (၂ စုံ)
၇) РОСОБРНАДЗОР သို့ပေးရန်အပေါ်စာ (၁ စုံ)
၈) Протокол совета (၃ စုံ)
၉) Опись документов အမှတ် ၁ (၁ စုံ)
၁၀) Опись документов အမှတ် ၂ (၁ စုံ)
၁၁) Доклад (၁ စုံ)
၁၂) Регистрационно-учетная карточка (ကဒ်ထူပြားဖြင့် ၂ ကဒ်)
၁၃) Учетная карточка диссертации (ကဒ်ထူပြားဖြင့် ၃ ကဒ်)
၁၄) ИКД (ကဒ်ထူပြားဖြင့် ၄ ကဒ်)
၁၅) ငွေရှင်းပြေစာ (တစ်စောင်)
၁၆) Аттестационное дело (ပေးရန်မလို၊ Еmail သို့သာပို့ရန်)
၁၇) Почтовые карточки (၂ ကဒ်)
၁၈) စာရွက်စာတမ်းထည့်သည့်ဖိုင်တွဲ (скоросшиватель "Дело №") (၂ ဖိုင်)
ရှေ့အဆင့်များတွင် Дссертация စာအုပ်ချုပ်ပုံကိုရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ оппонент (၃) ဦးထံပေးထားသော စာအုပ်များ အနက်မှတဦးဦးမှ отзыв ပေးတာနဲ့ စာအုပ်ပါပြန်ပေးပါလိမ့်မည်။ ထိုထဲမှ စာအုပ်တအုပ်ကို Нина Григорьевна အားပေးရင်ရပါပြီ။
диссертация အား Print ထုတ်ပြီးကလစ်ညှပ်၍ ပေးရင်ရပါပြီ။ စာအုပ်ချုပ်ရန်မလိုပါ။
Defense တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအားမှတ်တမ်းအနေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစာတမ်းဖြစ်ပါသည်။ နမူနာပုံစံအား ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါသည်။ Defense တွင်မိမိအားမေးသောမေးခွန်များ၊အဖြေမှန်များ၊ ဆရာများနှင့် совет ၏ председатель မှပြောသောစကားများကို အသံသွင်းထားသောဖိုင်မှတဆင့် စာရွတ်ပေါ်တင်ရမည့်အတွက် မိမိတစ်ဦးတည်းလုပ်၍မရပါ။ ဆရာနှင့်အတူတိုင်ပင်လုပ်ရပါမည်။ Defense နေ့တွင် Заключение диссетрационного совета အားပြင်ဆင်ရမည့်အချက်များကိုပြောမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ထိုအချက်များကိုလည်းအရင်ပြင်ဆင်ရပါမည်။ ပြင်ဆင်ပြီးသား Заключение ကိုသာ Стенограмма တွင်ထည့်ရမှာပါ။ Стенограмма ရေးပြီးပါက ၂ စုံထုတ်၍ Нина Г.М. အားပေးလို့ရပါပြီ။
ရေးပုံရေးနည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Стенограмма နည်းတူ ပြင်ဆင်ပြီးသား Заключение диссетрационного совета အား Справка တွင်ထည့်ပေးရမှာပါ။ Стенограмма နှင့် Справка မှာ Defense ပြီးနောက်ပြင်ဆင်ရမည့်စာရွတ်စာတမ်းများတွင်လက်အ၀င်ဆုံးနှင့်အခက်ဆုံးဖြစ်သည့်အတွက် ထိုနှစ်ခုအားအရင်ဆုံးဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုနှစ်ခုပြီးထားပါက စာရွတ်စာတမ်းအားလုံးပြီးရန်မခက်တော့ပါ။
ွ၅) ФГУП «ВНТИЦ» သို့ပေးရန်အပေါ်စာ (၃ စုံ)
ကျောင်းတံဆိပ်တုန်းထုထားသေား စာရွက်လွတ် (Бланк) တစ်ရွက် အား Нина Г.М. မှပေးပါမည်။ ထိုစာရွတ်ပေါ်တွင် Print ထုတ်ရမှာပါ။ နမူနာဖိုင်အား ဒီမှာယူနိုင်ပါသည်။ Print ထုတ်ပြီးပါက ထို ကျောင်းတံဆိပ်ပါသော စာရွက်အားကော်ပီ (၂) စုံထပ်ပွား၍ စုစုပေါင်းထို (၃) ရွက်အား Нина Г.М. အားပေးလို့ရပါပြီ။
နမူနာပုံစံအား ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ပြင်ဆင်ရေးသားပြီးပါက ၂ စုံထုတ်၍ ပေးလို့ရပါပြီ။
ကျောင်းတံဆိပ်တုန်းထုထားသေား စာရွက်လွတ် (Бланк) တစ်ရွက် အား Нина Г.М. မှပေးပါမည်။ ထိုစာရွတ်ပေါ်တွင် Print ထုတ်ရမှာပါ။ ရေးသားပုံရေးသားနည်း နမူနာဖိုင်အား ဒီမှာယူနိုင်ပါသည်။
Выписка совета လို့လည်းခေါ်နိုင်ပါသည်။ နမူနာပုံစံအား ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ရုရှားကျောင်းသားများ အတွက် ထိုစာရွက်မှာ ဘွဲ့လက်မှတ်မရခင် (၆) လအတွင်း кандидат техн. наук ဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံစာအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ လိုချင်ပါက Нина Г.М. ထံမှ လက်မှတ်အားလုံးထိုးပြီး ရင်ပြန်တောင်းယူနိုင်ပါတယ်။
နမူနာပုံစံအားဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ စာမျက်နှာနံပါတ်များကို သတိထားပြီးတပ်ရမှာပါ။ တချို့ Отзыв များမှာ စာရွက်တစ်ရွက်ထဲတွင် ရှေ့ခြမ်းနောက်ခြမ်းရေး ၍ နှစ်မျက်နှာဖြစ်သော်လည်း Опись документов တွင်မူ တစ်မျက်နှာအဖြစ်သာယူပါတယ်။ Нина Г.М. မှလည်း သေချာပြန်၍စစ်ဆေးပေးမှာပါ။
နမူနာပုံစံအားဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Опись документов အမှတ် ၁ နှင့်ဆင်ထူသော်လည်း အမှတ်စဉ် (၃)နှင့် (၈) တွင် ကွာခြားချက်များရှိပါသည်။ အထက်ပါအတိုင်း စာမျက်နှာနံပါတ်များကို သတိထားပြီးတပ်ရမှာပါ။
နမူနာပုံစံအား ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Defense နေ့တွင်ပြောသည့် Доклад အတိုင်းဖြစ်သော်လည်း ယခုစာတမ်းအနေနှင့်တင်ရမည့် Доклад တွင်မူ ပိုပြီးစုံစုံလင်လင် မြင်သာစွာရှင်းလင်းပေးရမှာပါ။
နမူနာပုံစံအား ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ print ထုတ်ပါက ကဒ်ထူပြားဖြင့် (на плотном листе) ထုတ်ရမှာပါ။ 3-й корпус ဒုတိယထပ်ရှိ print ထုတ်သည့်ဆိုင် (သို့) အဆောင်ရှိ Swamp တွင်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ စာရွက်တစ်ရွက်တွင် ၄ ကဒ် ပါသည့်အတွက် ထုတ်ပြီးပါက တကဒ်ခြင်းဖြစ်အောင် ဖျက်ပြီးမှ ပေးရမှာပါ။ အချိုးစားအမှန်က တော့ အလျား ၁၄၅ စင်တီမီတာနဲ့ အနံ ၁၀၅ စင်တီမီတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နမူနာပုံစံအား ဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အထက်ပါအတိုင်း စာရွက်တစ်ရွက်တွင် ၄ ကဒ် ပါတဲ့အတွက် ဖျက်ပြီးမှ တစ်ကဒ် စီပေးရမှာပါ။ အထူးသတိပြုရမှာက တစ်ကဒ်ခြင်းစီအတွက် ရှေ့ခြမ်းနောက်ခြမ်း ပါပါရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နေရာသေချာချိန်ပြီး သေချာမှ ကဒ်ထူဖြင့်ထုတ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်ပါအတိုင်း အချိုးစားအမှန်ကတော့ အလျား ၁၄၅ စင်တီမီတာနဲ့ အနံ ၁၀၅ စင်တီမီတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ИКД အတွက် အချက်လက်ဖြည့်ဖို့ ပထမဆုံး ВНТИЦ ဆိုဒ်ဖြစ်တဲ့ ဒီဆိုဒ် ကိုသွားပြီး Register လုပ်ရမှာပါ။ ပြီးပါက login ၀င်ပြီး Информационные карты диссертаций အကွက်မှ Новая ကိုနိုပ်ပြီး အချက်လက်ဖြည့်ရမှာပါ။ အချက်လက်ဖြည့်ပြီးသား ИКД အား ဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အချက်လက်ဖြည့်ပြီး запись လုပ်ပြီးပါက Информационные карты диссертаций အကွက်ကိုပြန်သွား၍ Печать 1 နှင့် Печать2button တို့အားတခုစီနိုပ်၍ နမူနာ word file တွင် တခုခြင်းပြင်ရမှာပါ။ Входящий номер ВНТИЦ အား သတိပြုရမှာပါ။ အချက်လက်မှား၍ တစ်ခါပြန်ပြင်တိုင်း Входящий номер ВНТИЦ လည်း ပြောင်းနေမှာပါ။ အချက်လက်အားလုံးပြီးပါက အထက်ပါအတိုင်း ကဒ်ထူဖြင့် ၄ ကဒ်ထုပ်ရမှာပါ။ ထို (၄) ကဒ်ကို Нина Г.М. အားပေးပြီးပါက ၀က်ဘ်ဆိုဒ်မှအချက်လက်အားပြန်မပြင်မိစေရန်သတိပြုရမှာပါ။ ပြန်ပြင်တိုင်း Входящий номер ВНТИЦ ပြောင်းမှာမို့လို့ပါ။
Себер банк ကနေ Нина Г.М. ပြောသော ဘဏ်အကောင့်သို့ ရူဗယ် ၁၂၀၀ လွဲရမှာပါ။ ဘဏ်အကောင့် မှာအပြောင်းလဲရှိနိုင်တာကြောင်နမူနာမတင်ပေးတော့ပါဘူး။ ငွေလွှဲပြီးပါက Нина Г.М. ထံပြေစာပေးရင်ရပါပြီ။
အသင့်လုပ်ပေးထားသော Excel ဖိုင်တွင်ဖြည့်ပြီး oda@miee.ru နှင့် dps@miee.ru သို့ပို့ရန်သာဖြစ်သည်။ ထိုမေးလ်များမှာ Отдель аспирантуры и докторантуры မှမေးလ်များဖြစ်သည့် အတွက် မေးလ်ပို့ပြီးကြောင်းသွားပြောရမှာပါ။ up-to-date ဖြစ်တဲ့ Excel နမူနာဖိုင်ကိုလည်း ထိုဌာနတွင်တောင်းနိုင်ပါတယ်။ နမူနာဖိုင်အား ဒီမှာယူလို့ရပါသည်။
3-й корпус ရှိပထမထပ်မှ စာရေးကိရိယာဆိုင်တွင်ရနိုင်ပါသည်။
အထက်ပါစာရွက်စာတမ်းများအားပေးပြီးပါက секретарь диссетарционных советов ဖြစ်တဲ့ Нина Г.М. မှ လက်မှတ်အားလုံးထိုးပြီးလောက်မည့်နေ့ကိုချိန်းပါမည်။ စာရွက်များအားလုံးလက်မှတ်ထိုးပြီးပါက Нина Г.М. မှ (၃) ထုတ်ထုတ်ပေး၍ Moscow မြို့ရှိနေရာ (၃) နေရာအားသွားပေးခိုင်းမှာပါ။ လက်ခံရရှိကြောင်းလက်မှတ်အားအပေါ်စာများပေါ်တွင် တစ်နေရာလျှင်တစ်ခု ပြန်ထိုးခိုင်း၍ စုစုပေါ်င်း (၃) ရွက်အား Нина Г.М. အားပြန်ပေးပြီးပါက အားလုံးပြီးပါပြီ။
Нина Г.М. ပေးလိုက်သော ဖိုင် ၃ ခုအား Moscow ၃ နေရာကိုသွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
01. Российская Государственная библиотека
02. ВАК Минобразования России
03. ФНГУ ЦИТиС
အဆင့် (၆) Defense အပြီး ВАК သို့တင်ရန်စာရွက်စာတမ်း...
ФГУП «ВНТИЦ» သို့ပေးရန်အပေါ်စာ
Российская Государственная библиотека သို့ပေးရန်အေ...